जोला, चेल्सी र पुर्नआगमन | Hamro Khelkud
जोला, चेल्सी र पुर्नआगमन
लन्डन (एजेन्सी)– जति बेला चेल्सीको स्वामित्व रुसी धनाद्य रोमन अब्रामोभिचले किनेका थिएनन्, त्यति बेला यो बेग्लै क्लब थियो । यसका प्रशंसक पनि अहिलेको जत्ति थिएन् । क्लबको उपस्थिति इंग्लिस फुटबलमा भने दरिलो नै थियो ।
त्यति नै बेला चेल्सीका स्टार खेलाडी थिए, जियानफ्रान्को जोला । उनले सात वर्ष भन्दा केही बढी समय चेल्सीका लागि खेले । सन् १९९६ मा उनी चेल्सी आइपुगे र २००३ सम्म खेले । उनलाई चेल्सीमा भित्र्याउने काम गरेका थिए, अरू कसैले होइन, रुड गुलिट । डच लेजेन्ड गुलिटलाई कसले बिर्सन सक्छ र ? जोला पनि उत्तिकै बराबरका खेलाडी हुन्, कम्तीमा चेल्सीका लागि ।
त्यसैले त केही वर्ष अगाडि मात्र चेल्सीका समर्थकले गरेको मतदानको आधारमा उनी चुनिएका थिए, यो क्लबका लागि खेलेका अहिलेसम्मकै महान खेलाडी । यस्तो नहोस पनि किन र भने फेरि ? त्यति बेला क्लब न त अहिले जस्तो धनी थियो । धनी नभएको क्लबसँग महँगा खेलाडी पनि कहाँ धेरै हुन्थ्यो र ? तर यस्तै सीमितताबीच जोलाले चेल्सीलाई राम्रै सफलता दिलाए ।
उनको यस्तै यस्तै अब्बल दर्जाको खेलको मदतले त हो, चेल्सीले सन् १९९६–२००३ बीच दुई संस्करणको एफएकप, अनि एकरएक यूईएफए विनर्स कप, यूईएफए सुपरकप र लिगकप जितेको । जति बेलासम्म जोलाले स्टायनफोर्ड ब्रिजमा खेले, त्यति बेला उनले साँच्चै आफ्नो खेलले तहल्ला नै मच्चाए । यी इटालीका फरवार्डको कुरै बेग्लै थियो । उनले त्यति बेला मैदानमा यस्तो गरे, यसरी प्रतिद्वन्द्वी खेलाडीलाई छक्याए, ती सबै सुन्दा र अहिले हेर्दा कथा जस्तै लाग्न सक्छ ।
अहिले यिनको यो सबै चर्चा किन भन्दा उनी फेरि चेल्सीमा फर्केका छन् । अब उनको भूमिका हो, सहायक प्रशिक्षक हो । सहायक प्रशिक्षक ? प्रश्न उठ्न सक्छ, आखिरमा उनी जत्तिको प्रशिक्षकलाई किन फेरि सहायक बन्नु र्पयो ? हुन पनि यसअघि उनले प्रशिक्षककै रूपमा वेस्ट ह्याम, वाटफोर्ड, बर्मिङघम र कागलिरी जस्ता क्लब सम्हालिसकेका छन्, एक्लै आफैले । सायद यसको उत्तर हुन सक्छ, चेल्सीप्रतिको उनको माया । त्यसैले पनि जोलाको चेल्सी प्रवेश मीठो पुर्नआगमन रहेको छ ।
यदी कोही चेल्सीको भर्खरै मात्र समर्थक बन्न थालेको हो भने जोला खेल्दाको चेल्सीको इतिहास एकपल्ट पल्टाए, निकै राम्रो । जोला आफैले भनेका छन्, ‘चेल्सी फर्केकोमा म निकै खुसी छुं ।’ उनलाई अहिले यहाँ ल्याएका हुन्, मुख्य प्रशिक्षक मौरिसिओ सारीले । अबका दिनमा चेल्सीले कसरी खेल्नेछ, यिनै दुई इटालीका फुटबल व्यक्तित्वमा भर पर्छ । यहाँनिर एउटा छुट्याउनै नहुने तथ्य के भने अहिले त यी जोला सहायक प्रशिक्षक छन्, कुनै दिन त्यस्तो पनि आउने छ, जति बेला उनी मुख्य प्रशिक्षक नै हुनेछन् ।